fitsapana betalactam-tetrayclines-streptomycin-chloramphenicol - BALLYA
Ireo singa mifandraika amin'ny BTSC4
Betalactam + Tetracycline + Streptomycin + Kitapo fitsapana Combo Chloramphenicol
1. Inona ny fitsapana Combo Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol?
4. Inona no atao hoe streptomycin?
5. Ny loza ateraky ny Betalactam, Tetracycline, Streptomycin ary Chloramphenciol
6. Endri-javatra amin'ny Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol Combo Test
7. Fomba fitiliana Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol Combo Test
8. santionany amin'ny fitsapana Combo Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol
9. Famerana ny faran'ny test Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol Combo Test
10. Ny maha-zava-dehibe ny fitsapana Combo Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol
11. Ireo mpiorina amin'ny Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol Combo Test
12. Fitaovana ho an'ny fitsapana Combo Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol
13. Ahoana ny fampiasana ny Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol Combo Test?
15. Ahoana ny fomba hanafarana fitsapana Combo Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol Combo?
Inona ny fitsapana Combo Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol?
β-lactam antibiotika dia kilasin'ny antibiotika lehibe misy peratra β-lactam ao amin'ny rafitra simika. Amin'ny ankapobeny ny antibiotika rehetra izay misy core-lactam core amin'ny firafitry ny molekiola dia an'ny β-lactams Antibiotics.
Ny antibiotika toy izany dia manana tombony amin'ny fiasan'ny bakteria mahery, ny poizina ambany, ny fambara ary ny fahombiazan'ny klinika tsara.
Azon'izy ireo atao ny manakana ny synthase mucopeptide amin'ny rindrin'ny sela, dia ny proteinina mamatotra penicillin (PBPs), ka manakana ny fandikana ny mucopeptides amin'ny rindrin'ny sela, ka miteraka lesoka amin'ny rindrin'ny sela bakteria sy fanitarana bakteria.
Ny fomba fiasan'ny tetracycline Ny zava-mahadomelina dia afaka mamatotra manokana ny toerana misy ny 30 S iminoyl ribosome, misoroka ny fifamatorana amin'ity toerana ity, ka manakana ny fitomboan'ny rojo peptide, misy fiatraikany amin'ny synthesie proteinina bakteria na zavamiaina bitika hafa.
Amin'ny ankapobeny dia tsy ampiasaina amin'ny aretin'ny bakteria izy io, fa ampiasaina indrindra amin'ny Rickettsiosis, Brucellosis, granuloma lymphatic, pneumoniae mycoplasma, spirochetes, chlamydia, sns. Tsy feno ny fitrohana am-bava azy. Ny tetracycline dia azo afenina ao anaty rononon-dreny.
Ny paikadiny amin'ny asany dia ny zava-mahadomelina afaka mifatotra manokana amin'ny toeran'ny 30S subunit ny ribosome mba hisorohana ny fifandraisan'ny aminoacyl-tRNA amin'ity toerana ity, ka manakana ny fitomboan'ny rojo peptide ary misy fiatraikany amin'ny fampidirana proteinina ny bakteria na hafa zavamiaina bitika pathogenika.
Ny Tetracycline dia manana hetsika fanoherana mahery vaika manohitra ny Staphylococcus aureus, pneumococcus, Streptococcus pyogenes, Neisseria gonorrhoeae, meningococcus, Escherichia coli, Aerobacter, Shigella, Yersinia, Listeria monocytogenes, Rickettsia, Mycoplasmain, Chlamyet, etc.
Streptomycin dia antibiotika alkaline misandrahaka be avy amin'ny mpanelanelana amin'ny kolontsaina volondavenona Streptomyces. Ny formula molekiola dia C21H39N7O12. Izy io dia manana firafitry ny molekiola tena sarotra, ahitana ny streptomycin sy N-methyl-glucose. Matetika amin'ny endrika sulfate, kristaly fotsy na mavo, tsy misy fofona sy mangidy, hygroscopic, soluble in water, insoluble in methanol, ethanol, acetone, chloroform and eter, stable.
Satria ny streptomycin dia misy vondrona aldehyde ao amin'ny molekiola izay miovaova, ary lasa dihydrostreptomycin aorian'ny hydrogénation. Ny streptomycine ampiasaina matetika dia ny streptomycin, streptomycin B sy ny sisa. Streptomycin dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny bakteria mycobacterium tuberculosis, ary zava-mahadomelina fanoherana tuberculosis manan-danja. Ny fatra voafetra farany ambany amin'ny streptomycin amin'ny Mycobacterium tuberculosis amin'ny ankapobeny dia 0.5 g / ml.
Streptomycin dia antibiotika nafenin'ny Streptomyces agaricus. Manana ny vokatry ny fitsaboana endotracheal izy io ary afaka miditra amin'ny vatan'ny zavamaniry ary mitondra any amin'ny faritra hafa. Izy io dia misy fiantraikany tsara amin'ny fifehezana ny aretin-bakteria zavamaniry izay afaka mifehy tsara ny aretin-bakteria, toy ny paoma, poara, hain-trano, aretim-paraky, sigara manga, laisoa sinoa lo, loaky ny bakteria voatabia, tara-pahazavana, karazana ovy lo ovy, shank mainty, pentina zoro, ahitra matory, hodi-kazo kôkômbra, voan'ny bakteria, lozam-pifamoivoizan'ny seleria, teboka ravina bakteria.
Ampiasaina indrindra izy io amin'ny fifehezana ny fahasimban'ny ravina bakteria, ny aretin-koditra, ny aretin-koditra, ny keratose bakteria kôkômbra sns. Azo ampiasaina amin'ny famafazana, famenoana ny faka ary famonoana voa. Ny fahitana ny streptomycine dia nitondra anjara biriky lehibe tamin'ny fitsaboana tuberculosis.
Ny tuberkulose dia aretina tsy azo sitranina tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 izay namono olona an'arivony isan-taona. Tamin'ny taona 1888 dia hitan'i Waxman fa nanjavona ny tuberkulose rehefa niditra tao anaty tany izy. Taorian'ny fikarohana 3 taona dia hita fa ny mikraoba bitika tsy misy poizina ao anaty tany dia mety mamono ny bakteria tuberculosis.
Tamin'ny 1939, Waxman dia naka bobongolo sy zavamiaina bitika isan-karazany tamin'ny tany, nanokana azy ireo ary nanandrana azy ireo imbetsaka. Tamin'ny 1943 dia namoaka ny streptomycin izy, fitsaboana mahomby ho an'ny tioberkilaozy, avy amin'ny kolontsaina Streptomyces.
Taorian'ny fahazoana bebe kokoa ny fatra sy ny fampiasana fanafody vaovao. Ny streptomycine koa dia hita fa mahomby amin'ny meningite. Waxman dia nahazo ny loka Nobel ho an'ny fitsaboana tamin'ny 1952. Nanangana streptomycin i Shina nanomboka tamin'ny 1958.
Streptomycin dia antibiotika aminoglycoside. Amin'ny alàlan'ny fiasa amin'ny ribosome amin'ny bakteria, dia manakana ny tsy fitovizan'ny proteinina bakteria izy io ary manimba ny tsy fivadihan'ny membrane sela bakteria.
Ity fanafody ity dia afaka mitroka voalohany amin'ny alàlan'ny fanaparitahana passif amin'ny alàlan'ny proteinina membrane ivelany, ary avy eo amin'ny alàlan'ny rafitra fitaterana, amin'ny alàlan'ny membrane sela ao anaty sela, avy eo: mba hisorohana ny ammonia acyl tRNA ao anaty orientation marina, hanelingelina ny fivorian'ny ribosome, Taona 70 nanomboka ny fananganana sarotra;
Ny triplet code tRNA sy mRNA dia entina amin'ny tsy fitoviana, ka mahatonga ny subunit 30 an'ny ribosome feno hamaky amin'ny fomba diso ny kaody génétique, ka miteraka tsy fitoviana proteinina tsy mandeha sy miasa.
Ny fanakanana ny famatorana ny faran'ny famaranana amin'ny toerana A, dia nanakana ny rojo peptide synthesized tsy hovotsorana, ary nanakana ny fisarahan'ny 70 taolana feno taolana. Ny fizotry ny fanaparitahana sy ny fanangonana ribosome marobe dia voasakana, ka miteraka fihenan'ny ribosome amin'ny bakteria.
Ny loza ateraky ny Betalactam, Tetracycline, Streptomycin ary Chloramphenciol
Raha mamono bakteria ny antibiotika, izy ireo koa dia mandray anjara amin'ny fisavana bakteria tsy mahazaka zava-mahadomelina. Miaraka amin'ny mutation, bakteria vitsivitsy mamokatra fototarazo vaovao mahazaka zava-mahadomelina. Tafavoaka velona izy ireo ary manohy mihabetsaka amin'ny tsindry velona vokatry ny antibiotika.
Rehefa mandeha ny fotoana dia mihabetsaka ny bakteria mahatohitra ka mahatonga ny antibiotika ho very ny fitsaboana azy ireo. Raha be loatra ny antibiotika ampiasaina amin'ny toerana tsy ilaina, dia hampitombo ny mety hisian'ny bakteria eo amin'ny tontolo iainana amin'ny antibiotika, ka hanafainganana ny tafika mahatohitra zava-mahadomelina.
Ankehitriny, ny toe-javatra misy ny fanoherana ny bakteria dia tena matotra. Ny bakteria dia manana fanoherana mahery vaika amin'ny antibiotika be mpampiasa ankehitriny.
Raha ny angon-drakitra momba ny tambajotram-pahitana fanoherana antimicrobial China tamin'ny taona 2009, eo amin'ireo bakteria hita tany amin'ny hopitaly 100 mahery, Staphylococcus (Staphylococcus aureus sy Staphylococcus epidermidis), methicillin, macrolides, ary karazana antibiotika iraisana toy ny quinolones dia manana tahan'ny fanoherana mihoatra ny 50%.
Ny tahan'ny fanoherana ny Escherichia coli mankany quinolones ary ny cephalosporins an'ny taranaka fahatelo dia mihoatra ny 50% ihany koa, ary ny 66.2% amin'ny Escherichia coli dia afaka mamokatra ultrawide Spectrum β-lactamase. Ankoatr'izay dia nipoitra koa ny "super-bacteria" izay tsy vonoin'ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina.
Taloha dia namorona antibiotika vaovao ny olona hamahana ny olan'ny fanoherana zava-mahadomelina, saingy izao ny hafainganan'ny famoronana antibiotika vaovao dia miadana lavitra noho ny hafainganam-pandehan'ny fanoherana ny bakteria. Noho izany dia nanjary ilaina ny mifehy ny fampiasana antibiotika hampihemotra ny fihanaky ny bakteria tsy mahazaka zava-mahadomelina.
Endri-javatra amin'ny Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol Combo Test
Fomba fitiliana ny fitsapana Combo Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol
Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol Combo Test dia andrana volamena-colomatography volamena koloidaly izay mamantatra ny Beta-lactams, Tetracycline, Chloramphenicol ary Streptomycin amin'ny ronono manta, vovo-dronono, ronono pasteuris ary mihaona amin'ny MRL EU. Ity kit ity dia azo ampiharina amin'ny fanandramana haingana eny an-toerana ataon'ny departemanta isan-karazany.
Santionany amin'ny fitsapana Combo Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol
Fepetran'ny detection an'ny Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol Combo Test
Ny maha-zava-dehibe ny fitsapana Combo Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol
Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol Combo Test dia afaka manampy ny mpanamboatra, ny masoivoho mpanara-maso ary ny maso ny kalitaon'ny vokatra ary manampy ny olona hihazona ny fahasalamany.
Ireo mpiorina amin'ny Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol Combo Test
Fitaovana ho an'ny fitsapana Combo Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol
3.	Takelaka tsara
Ahoana ny fampiasana ny Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol Combo Test?
Ahoana ny fomba hanafarana fitsapana Combo Betalactam Tetracycline Streptomycin Chloramphenicol?